Dumar badan ayaa u maleynaya in dayska ay tahay wax sanado ah - ama xitaa tobanaan sano. Waad la yaabi kartaa inaad barato, si kastaba ha noqotee, in astaamaha ugu horreeya ee caadada dhalmo-dayska ay ka bilaaban karaan 40-naadka iyo, haweenka qaarkood, ugu horreyn 30-jirkooda. Kooxaha naxariista leh ee ka shaqeeya Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ee Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH waxay fahamsan yihiin saameynta baaxada leh ee ay caadadu ku yeelan karto nolosha dumarka isla markaana ay ka go'an tahay inay si buuxda u bixiyaan daryeelka menopause loogu talagalay bukaanada ku jira marxalad kasta oo dayska ah. Akhriso si aad waxbadan uga ogaato wajiga hore ee caadada dhalmo dayska - perimenopause - oo ay kujiraan calaamadaha iyo astaamaha micnahiisu yahay inaad bilaabayso isbedelkan muhiimka ah.
Perimenopause iyo menopause
Menopause lafteeda waxaa loola jeedaa qodobka inta lagu guda jiro nolosha haweeneyda marka ugxanteeda ay joojiso sii deynta ukunta, wareegga caadadana uu joogsado. Farsamo ahaan marka loo eego, haweeneyda waxaa loo tixgeliyaa inay tahay dhalmo-dayska markay ka tagto 12 bilood bilaa caado. Tani waxay badanaa ku dhacdaa haweenka 50 jir. Si kastaba ha noqotee, u gudubka caadada ayaa inta badan bilaabata sannado ka hor waxaana loo yaqaan 'perimenopause'. Inta lagu jiro perimenopause, qadarka estrogen iyo progesterone ee ay soo saarto ugxan-yari haweeneyda ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaya, in kasta oo heerarkeedu ay weli sarreeyaan oo ay leeyihiin wareegga caadada oo mararka qaarkoodna ay uur yeeshaan. Dumarka badankood, in kastoo, perimenopause waxay u keentaa hoos u dhac fiiqan xagga taranka iyo sidoo kale tiro calaamado kale ah.
Haddii aad ku jirto dhammaadka da'da 30, 40s, ama 50s oo aad dareentay isbeddelo ku dhaca wareeggaaga caadada ama astaamo kale oo cusub, waxaa jirta fursad aad kula kulmi karto astaamaha hore ee dhiig-baxa. Shan astaamood iyo astaamo uur-ku-wareegga ayaa ah:
1. Kulayl kulul: Dumarka badankood waxay la kulmaan ololeyaal kulul mar uun inta lagu guda jiro xilliga kala-guurka caadadooda, iyadoo bukaanjiifka qaar ay yeeshaan kuleyl joogto ah inta ka dhiman noloshooda. Kuwani waxay noqon karaan kuwo khafiif ah ama daran, soo-noqnoqonaya ama waaraya, waxaana caadi ahaan lagu gartaa dareen lama filaan ah oo diirimaad ama kuleyl gudaha ah. Dumar badan ayaa sidoo kale la kulma dhididka habeenkii ama dhaxanta oo ay weheliyaan kulayl kulul.
2. Isbeddellada niyadda: Xanaaqa, walwalka, iyo niyadjabka ayaa ah qaar ka mid ah astaamaha ugu caansan ee cilmu-nafsiyeed ee ku soo boodka ah waxaana laga yaabaa inay ka sii daraan marka caadada caadadu ay soo dhowaato.
3. Xilliyada aan caadiga ahayn: Isbeddelka ku dhaca qanjirka 'progesterone' iyo 'estrogen' inta lagu jiro mudada perimenopause waxay sababi kartaa caadada haweeneydu inay noqoto mid fudud, mid culus, ama aan caadi ahayn. Haweenka qaarkood waxay bilaabaan inay ka boodaan muddooyinka caadada.
4. Xanuun galmada: Qalitaanka xubinta taranka haweenka iyo galmada xanuunka badanaa waxay la xiriiraan xinjirowga caadada iyo caadada. Intaa waxaa dheer, haween badan ayaa la kulma hoos u dhac ku yimaada galmada (libido) maadaama heerarka hoormoonkoodu uu bilaabmayo inuu hoos u dhaco.
5. Calool jilicsanaanta: In kasta oo jilicsanaanta naasuhu inta badan dhacdo inta lagu jiro uurka hore ama bilawga muddada, waxay sidoo kale noqon kartaa astaamo muujinaysa perimenopause.
Sidee loo daaweeyaa astaamaha menopause?
Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in caadada daysku ay tahay wax dabiici ah oo lamahuraan ah nolosha haweeneyda. Intaas marka la dhaho, astaamaha menopause-ka waxay fahmi karaan niyad jab iyo qas. Nasiib wanaagse, daryeelka menopause wuxuu haweenka siiyaa fursad ay ku horumariyaan calaamadaha menopause-ka oo ay mar labaad isku dareemaan naftooda. Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, bixiyeyaashayada u heellan waxay abuuri doonaan qorshe daryeel caadada oo ku habboon oo ku saleysan dhowr arrimood oo shaqsi ah, oo ay ku jiraan:
Taariikhda shaqsiyeed iyo tan qoys ee cudurada dumarka ama naasaha
Dabeecadda iyo darnaanta calaamadaha menopause
Guud ahaan caafimaadka iyo xaaladaha kale ee caafimaad
Xaaladaha qaarkood, waxay u noqon kartaa badbaado oo ku habboon dumarka inay maraan daaweynta beddelka hoormoonka (HRT) ee calaamadaha menopausal. Inta lagu guda jiro la-tashigaaga daryeelka menopause, bixiyeyaashayada aqoonta leh ayaa kaa caawin doona go'aaminta habka ficil ee sida ugu wanaagsan u dabooli kara baahiyahaaga.
Ku raaxeyso nolosha marxalad kasta oo aad ku jirto daryeelka perimenopause iyo menopause ee ku yaal Bartamaha Ohio
In kasta oo caadada daysku tahay mid aan laga fursan karin, haddana waxaad xaqiiqdii haysataa xulashooyin aad ku yareyneyso waxyeelooyinkeeda iyo yareynta astaamahaaga. Si aad wax badan uga barato xalalka perimenopause iyo menopause-ka si ay kaaga dhigto inaad dareento dhalinyaro, firfircoon, iyo fulin, jadwalka la-tashi gaar ah oo kuugu dhow Xirfadlayaasha kuugu dhow ee ku yaal Caafimaadka Haweenka ee Columbus, Dublin, ama Westerville, OH maanta!
Muddo intee le'eg ayay Robotic Hysterectomy qaadataa?
Hel fikrad fiican oo ku saabsan waxa aad filan karto inta lagu jiro iyo kadib qalliinkaaga hysterectomy ee robotic oo leh macluumaad waxtar leh oo ku saabsan sida habraacu u shaqeeyo.
Maxay Yihiin Waxyaabaha Halista Ah ee Go'aaminaya Haddii Aad U Baahan Tahay Mammogram?
Ayaa ubaahan raajada naasaha aasaasiga ah, goorma, sababta, iyo intee jeer? Jawaabo ka hel dhammaan sawirradan mammogram-ka ah iyo in ka badan halkan.